Industrial yokukhiqiza - Digital Ukukhiqiza Co., Ltd.
Izimboni ezikhiqiza yokukhiqiza-ezincane batch
3D zokunyathelisa kuwukukhetha ehlukile ezincane-batch, onobuhle eziyinkimbinkimbi ihlelwe enkulu obujwayelekile, nokuthuthukiswa izinto ahambisanayo, 3D zokunyathelisa kancane kancane asetshenziswe yokukhiqiza ngqo, ezifana wamarobhothi, Aerospace, jigs & zalapho, izimoto engahlelekile futhi imoto weightlights njll
Industrial Manufacturing-3D jigs ukunyathelisa futhi ukwakheka
Amathuluzi njalo edingekayo ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, futhi imikhiqizo ethile kanye zalapho ahlukahlukene, imilenze futhi gages kungaba ngokuphawulekayo ngcono inqubo ngenkathi ekunciphiseni isikhathi ukukhiqizwa kanye zabasebenzi. Kodwa ngaphambi 3D zokunyathelisa Kwase kuvamile, izinkampani eziningi azikwazi nokugaya ngokwezifiso amathuluzi abo. Lapho zonke izinhlobo ezingabizi ezimbonini kanye ideskithophu 3D amaphrinta ezidumile, isimo ngokuqinisekile kuyoba ezahlukene.
Industrial Manufacturing-3D wokunyathelisa Automobile
Okokuqala, 3D zokunyathelisa has ngesivinini ngokushesha, ephansi ingxenye izindleko, kanye nobumfihlo ephakeme. Nge 3D zokunyathelisa ubuchwepheshe, onobuhle lomqondo kungadalwa e amahora noma izinsuku ukusiza OEMs futhi abakhiqizi ingxenye nokwandisa imiklamo futhi ukusheshisa umkhiqizo ubufakazi-of-umqondo izinqubo.
Okwesibili, Ukukhetha ahlukahlukene impahla, izakhiwo ezahlukene mechanical eqondile prototyping obusebenzayo uvumele abakhiqizi ukulungisa amaphutha futhi sithuthukise imiklamo ngasiphi isikhathi okwakuhlalwa kuzo lapho kusaqalwa, ukunciphisa izindleko amaphutha.
Ngokuya zalapho, 3D zokunyathelisa ubuchwepheshe inikeza indlela fast and olunembile ukuthi iyehlisa izindleko kanye nesikhathi ukukhiqizwa ithuluzi. Ngenxa yalokho, automakers abe ncono umthamo, ukusebenza kahle kanye izinga ngokushesha.
3D amaphrinta Kunconywa
3DSL-600 Sawubona: Yakha ivolumu: 600 * 600 * 400 (mm), Max umkhiqizo 400g / h